Date My Pet » Instant checkmating zvaJehovha Guide To kusvibisa Fake Online Daters
kubudikidza Logan Mupfungwa
Instant checkmating zvaJehovha Guide To kusvibisa Fake Online Daters
Dzimwe nguva uchingotaura vachitarisira pfungwa. Dzimwe nguva vanenge venhau kuedza kuita pfungwa. Uye dzimwe nguva vanongoda vanonyengedza imi. Chero kurudziro yavo, chinokosha bimvu paIndaneti kufambidzana Profile vari fakes zvakakwana - vemungano Profiles dzakagadzirirwa dupe akatendeseka paIndaneti daters. Uye kana musingadi kuchengeta ziso panze, unogona kuva chinotevera akuvara.
This vata- tsika, inonzi sezvo catfishing, nguva uye mari namatongo vanhu ose chete zuva. Nepo ruzhinji paIndaneti daters zvinoshamisa vanhu, kune mazai mashoma zvakaipa kunze uko. sezvinei, paIndaneti all scammers vanowanzotevedzera varege kuva sharpest mapanga vari kumucheri, saka kakawanda kuti blunders nyore kuti mari yokutenda kure muteyo yavo. Kana uchida kuva nechokwadi chokuti yako inotevera musi ndiyo chaiyo ngaakuitirei, chengeta Mazano aya nyore mupfungwa panguva yako paIndaneti rwendo vakananga dzorudo.
1) Mhanyai A Reverse Image Search
A nyepera Nhoroondo kunorevawo nyepera mifananidzo. Kana paIndaneti vanobiridzira avake nyepera paIndaneti Profile, vachada kazhinji dzinovabata mifananidzo vanowana kubva Internet. zvakananga, ndivo vanoona mushure Google "inopisa Muchinda" kana "musikana kupisa." Ivo unenge kunyange Upload headshots kubva modeling nzvimbo vakwanisewo Profile sezvo kutobudisa sezvinobvira. Usanyengedzwa. An nzira nyore kuona kana kwavo paIndaneti ronozwi DUPLICATE ndeyokuita muchimhanya Google neizvi mufananidzo kutsvaka. Kana avo Profile mufananidzo wakanamira zvose pamusoro Internet, kana mufananidzo pachena chomumwe munhu, uchaziva mune catfisher pamaoko enyu.
2) Tarirai For Unotyisa Chirungu
Kana kwavo Profile zvinovaita kuonekwa sokunge vakanga vakaberekerwa uye yakamutswa inoti, asi girama yavo unorira munhu chete kudzidza mutauro, ari rakakura dzvuku mureza. Online kufambidzana all scammers kazhinji mhiri kwemakungwa. Vachati kuti vari sezvo American sezvo Mount Rushmore, asi chokwadi ndechokuti ingotaurai kuti kuitira kutora mari American. Kana yako paIndaneti mudiwa wawo nomutoo nguva dzose anoita chiperengo uye girama zvikanganiso asingadi kubhururuka muna 3rd mukirasi giredhi, izvozvo zvingareva zvavari yokumwe Scammer.
3) Ita An Online Background Check
Public zvinyorwa zvinowanikwa wose anoda kuvaona. Saka kana munhu tamboshanyira imi paIndaneti akaberekwa muUnited States, vanofanira kuva muzvinyorwa faira. Search zita ravo, pamwe kwavo mamiriro, munzvimbo paIndaneti muzvinyorwa kutsvaka. Kana hapana anouya, Ndicho chiratidzo kuti havasi ekuvimbika zvachose nemi.
4) Chenjererai For Fast Operators
Kana munhu paIndaneti achida kusvetuka kuti "Kukuzivai" uye vanoenda kunyika "Soulmates youpenyu" pavaipfuura ukama, zvingasava nokuti uri wakazadzwa kudanana. Zvingava nokuti vanonyanya kufarira chikwama wako kupfuura mwoyo wako. Sezvo paIndaneti all scammers uchida kuita mari zvido zvako nokukurumidza sezvinobvira, vachada kufamba nakisa kutsanya. achinyumwira kutsanya. Kana uri abatwa muchamupupuri paIndaneti dzorudo, tora yechipiri kunetesa uye kaviri cheki kuti zvose vanenge vachiti ichokwadi.
5) Ona Kana vanongoda To Chat Online
Is 100% kukurukura zvakaitwa kuburikidza email chinyorwa? A kuramba kudana kana kusangana chiso nechiso kungangoratidza kupfuura yokunyanyisa kunyara. It kungareva kuti havadi kuti ndikupe kana chinhu kupokana nhema dzavo. Transparency ndicho chinoita kuti ukama hwakanaka. Kana vasingagoni kutaura pachena nemi, tora kuti sechiratidzo havafariri mamuri zvachose.
pakupedzisira, kana wabatwa amunyengera nevanhu paIndaneti Scammer uye vangobvumira yaakabiridzira mubude chero mari, nyaya yacho yeUnited nehurumende Internet Crime Complaint Center. Angadai zvishoma vachinyara kubvuma kuti wabatwa wanyengedzwa, asi nhau kuchabatsira kudzivirira vamwe vanhu vanobva kutanga scammed.